Mombassa, Kenya: amidy amin’ny tsena iraisam-pirenena ny dite Sahambavy | NewsMada
Sahambavy, kaominina ambanivohitra iray, 20 km atsinanan’i Fianarantsoa, hany tokana eto Madagasikara misy voly dite, hatramin’ny taona 1969. Amin’io toerana io ihany ny toe-tany sy ny toetr’andro mifandraika amin’ny voly dite eto amin’ny Nosy.
10 na 15 % ny vokatra ihany ny ampy ho an’ny tsena eto an-toerana satria tsy mpisotro dite ny Malagasy. Ankoatra izay, miondrana any ivelany avokoa. Amin’ny Malagasy, ny hoe dite, ravimboafotsy na ranomafana laroina voasary sy sakamalaho. Tsy tena dite ny dite amin’ny Malagasy. Ny vokarina any Sahambavy no tena dite, tsara kalitao, afaka mifaninana tsara eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Ratsy lalana ny mankany Sahambavy nefa azo leferina ihany raha ampitahana amin’ny kaominina ambanivohitra maro. Velarana maitso misy ny voly dite: 90 ha eo ho eo ny voly tsotra ataon’ny tantsaha, 220 ha ny voly indostrialy. 400 t isan-taona ny vokatra dite any Sahambavy. Betsaka izany raha eto amintsika, saingy tsy ampy 10 % amin’ny vitan’ny hafa. Alefa any Mombassa, Kenya, miditra amin’ny tsenan’ny dite, ny avy any Sahambavy. Mifaninana amin’ny vokatry ny hafa ka izay mahasahy mividy lafo no mahazo ny vokatra. Mividy sy mivarotra dite eto an-toerana ny orinasa Taf.
Manome hery… manala havizanana
Mpanao dite malaza eran-tany, ohatra, ny Lipton any Angletera. Voalohany ry zareo Anglisy, ny Indianina, ny Arabo amin’ny fisotroana dite. Io Lipton io, hatramin’ny 1870, mividy sy manodina ny vokatra asiana fangarony karazany maro. Misy dite atao hosotroina maraina, manome hery hoentina miasa; hafa ny amin’ny 10 ora, mitazona hery; karazany hafa ny amin’ny 2 ora tolakandro, mety tsy mampatory; mbola karazany hafa indray ny amin’ny 6 ora hariva, manala vizana. Mahafantatra izany tsara ry zareo mpisotro dite.
Sahirana ny mpandraharaha mpanondrana dite eto amintsika. Talohan’ny 2009, dimy andro monja dia tonga any Mombassa ny vokatra. Mbola niasa ny seranan-tsambon’i Manakara tamin’izany. Ankehitriny, tsy maintsy ampiakarina any Toamasina ny vokatra, miandry sambo, miampita mankany Nosy Maorisy, mihodina mankany Afrika Atsimo… telo na dimy volana vao tonga any Mombassa, raha ny fanazavan’ny mpandraharaha iray. Amin’izao valanaretina izao, mihitsoka tanteraka tsy tafavoaka ny vokatra mitentina anjatony tapitrisa ariary, atahorana sao ho simba.